यात्राको साइत जुर्न सक्छ । तर, समयमा होसियार बन्न नसक्दा खर्च बढ्ने देखिन्छ । परिवारजनबाट टाढिनुपर्ला । श्रमअनुसार फाइदा कमै हुने देखिन्छ । प्रयत्न गर्दा सामान्य उपलब्धि उठाउन सकिनेछ । सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई फाइदै हुनेछ । साँझतिर स्थिति अनुकूल बन्नेछ । पारिवारिक भेटघाटले खुसियाली छाउनेछ । नयाँ काम थाल्न पनि सकिनेछ ।
पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ला । लाभको अवसर मिले पनि तत्काल फाइदा लिँदा भविष्यमा नोक्सान हुन सक्छ । मिहिनेतको प्रतिफल अरूले हत्याउने चेष्टा गर्नेछन्, सजग रहनुहोला । सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई बिस्तारै लाभ हुनेछ । प्रयत्न गर्दा पछि फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ । साँझदेखि खर्च बढ्नाले आवश्यकता पूरा गर्न सरसापट लिनुपर्ला ।
रोकिएको काम बन्नाले उत्साहित भइनेछ । मिहिनेतले लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ । अवसरले पछ्याउनेछन् भने दिगो काममा जग बसाउने मौका छ । कर्मयोगले नाम, दाम र इनाम दिलाउन सक्छ । साँझदेखि आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन् । पहिलेका कामबाट पनि प्रशस्त लाभ हुनेछ । उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुनेछ । कृषि, पशुपालन र व्यापारमा फाइदा हुनेछ ।
अवसर आए पनि उपलब्धिका लागि संघर्ष गर्नुपर्ला । स्वार्थका लागि नजिकिनेहरूबाट सजग रहनुहोला । फाइदा नभए पनि समुदायको हक हित हुने काम गर्न सकिनेछ । सामाजिक जिम्मेवारी समेत प्राप्त हुने समय छ । साँझतिर विशिष्ट व्यक्तिहरू सहयोगीका रूपमा उपस्थित हुनेछन् । तारिफयोग्य काम गर्दै दाम, इनाम र प्रतिष्ठा हातपार्न सफल भइनेछ ।
प्रतीक्षित नतिजा कमजोर देखिनाले काम दोहोर्याउनुपर्ला । आम्दानी रोकिनाले योजना स्थगन हुन सक्छ । काम बिग्रने भयले सताउनेछ । तापनि प्रयत्न गर्दा चुनौतीहरू पन्छाउन सफल भइनेछ । अर्थ अभावले सताए पनि समस्या दर्साउँदा सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् । स्वास्थ्य भने कमजोर रहनेछ । साँझतिर पुरानो हिसाबकिताबले विवाद निम्त्याउन सक्छ ।
प्रियजनसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ । विभिन्न सहयोग तथा उपहार प्राप्त हुने समय छ । आयआर्जन पनि मनग्य हुनेछ । रमाइलो यात्राका बीच अतिथिका रूपमा सत्कार पाइनेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ । व्यापार–व्यवसायमा आम्दानी बढ्नेछ । साँझदेखि स्वास्थ्य कमजोर बन्नुका साथै काम बिग्रने भयले सताउनेछ । उपलब्धि न्यून हुनेछ ।
स्रोतसाधन जुट्नाले दिगो काम बन्नेछ । प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ भने द्वेष तथा ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन् । दिगो फाइदा हुने जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ । रोकिएका काम बन्नेछन् । उद्योग र व्यापारमा विशेष लाभ उठाउन सकिनेछ । साँझतिर व्यापारको बहानामा रमाइलो यात्रा हुन सक्छ । मान–सम्मान पाइनेछ र आकर्षक उपहारले उत्साहित भइनेछ ।
कामको मेसो नमिल्दा केही अलमल हुनेछ । कर्मक्षेत्रमा परिस्थिति अलि बिग्रन सक्छ । सानोतिनो समस्याले अल्झाउनेछ भने स्वास्थ्य पनि प्रतिकूल रहनेछ । तापनि मिहिनेत गर्दा अध्ययनमा प्रगति हुनेछ । गुरुजनको सुझाव र सन्तानको सहयोग लाभदायी बन्नेछ । साँझदेखि भौतिक साधन जुट्नाले दिगो काम प्रारम्भ हुनेछ । लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ ।
केही अवसर प्राप्त भए पनि ईर्ष्यालु मन भएकाहरूले सताउन सक्छन् । काममा समेत उल्झन आउनाले पछि परिनेछ । साझेदारीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्छ । केही घरायसी समस्याले पिरोल्न सक्छ । आफन्त टाढिन सक्छन् । अरूको मुख ताक्ने बानीले पछि परिनेछ । साँझतिर स्थितिमा सुधार आउनेछ भने पेसा–व्यवसायमा पनि फाइदा हुनेछ ।
साहसी काम गरेर प्रशस्त लाभ उठाउन सकिनेछ । नयाँ योजनातर्फ अग्रसर भइनेछ । दिगो फाइदा हुने काम हातलागी हुनेछ । सहयोगीहरूको माध्यमले रोकिएका काम बनाउन सकिनेछ । मेहनतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनेछ । केही उपहार पनि प्राप्त हुनेछन् । तर अरूको मुख ताक्ने बानीले समस्या पर्नेछ । आफ्नो प्रतिफलमाथि अरूले राज गर्नेछन् ।
सामान्य अवसर पाइनेछ । तर महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न बलजफ्ती अघि बढ्ने बानीले काम बिग्रन सक्छ । आगन्तुकले अलमल्याउने हुँदा योजनाअनुसार काम गर्न नसकिएला । सोख र हडबडीले केही समस्या निम्त्याए पनि व्यक्तित्वमा निखारता आउनेछ । पारिवारिक जमघटका बीच स्वादिष्ट खानपानको अवसर प्राप्त हुनेछ । साँझदेखि खर्च बढ्ने सम्भावना छ ।
वि.सं. २०७७ साउन २५ आइतवार (इ.स. २०२० अगस्ट ९)